Europe | KONGOLISOLO
Site na: KongoLisolona: August 6, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Ọ bụ na ọ gaghị abụ otu maka ndị isi ojii / ndị Africa niile n'ụwa? Ọ bụ ezie na anyị na-aga ije n'ime enweghị enyemaka, ka ịbanye ahịa ga-ebute l ...	GỤKWUO
Ọrụ ncheta: kedu nke meriri, Luis Moreno Ocampo na igwe asaa nke asaa megide Angelina Jolie? Otu n’ime abali anọ ndị a, onye bụbu onye ọka ikpe mbụ nke International Criminal Court (ICC) Luis Moreno Ocampo na Angelina Jolie zukọrọ maka mkparịta ụka
Site na: KongoLisolona: July 21, 2020 10: 10 Enweghị asịsa
Otu ga-ekwere; Ihe a si na ezigbo saga. Nwoke nke Moreno Ocampo nwere nlepụ anya, dị ka a ga - asị na ọ bụ site na anwansi, kwenyere steeti ya, na-eburu ya gaa igwe nke asaa. Gịnị kpatara…	GỤKWUO
States ma ọ bụ ndị isi ọdịda anyanwụ kpamkpam leghaara iwu dị mfe nke na-achịkwa mmekọrịta mba ụwa ma ọ bụ mmekọrịta dị n'etiti States ma ọ bụ n'etiti ndị na-eme ihe na mmekọrịta mba ụwa ... (VIDIO)
Site na: KongoLisolona: July 19, 2020 03: 31 Enweghị asịsa
Ha nhatanha nke ọchịchị, nnyonye anya n'ihe ndị obodo ndị ọzọ; ikike ndị mmadụ nwere ime mkpebi onwe ha, nke ahụ bụ ikwu ikike ha ịhọrọ li ...	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: July 18, 2020 00: 30 Enweghị asịsa
Ezigbo nsogbu! Ozi a doro anya ma doo anya: "Ndị isi ojii / ndị Africa ka bụ ndị ohu, n'agbanyeghị na di na nwunye Afro abụwo ụlọ n'ụlọ White House maka…	GỤKWUO
Aug08 02: 18